May 30, 2021 299
माछाको रक्षा नाग नागीनले गरेका छन् भन्ने कुरा सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो साँचो हो । त्यो पनि नेपालमै । काठमाण्डौबाट झण्डै २ किलोमिटर पर चोभार भनिने ठाउँमा एउटा यस्तो पोखरी छ जहाँ माछाको रक्षा त्यस पोखरीमा भएको नागराजा र नागरानीले गर्ने गर्दछन् ।
स्थानीय भन्छन्,‘यो पोखरीबाट कसैले पनि एउटा मात्र माछा झिकेर यदि लगेको छ भने त्यो मानिसको घरमा सर्पै सर्पले घेर्न पुग्दछन् । र त्यो मानिस पानीबाट झिकिएको माछा जसरी छट्पटाउँदछ त्यसरी ने छट्पटाएर मर्दछ ।
’ पोखरीको बारेमा जुन प्रकारको एउटा भनाई छ त्यसलाई स्थानीयले वर्षौंदेखि मान्दै र अनुशरण गर्दै आईरहेका छन् । पोखरीमा भएका माछाहरुलाई त्याहाँका स्थानियले चारो हाल्छन् तर नागराजा र नागरानीको डरले झिकेर भने खाँदैनन् । माछा र नाग नागीन्को वास्तविक कथालाई स्थानियहरु यसरी बताउँछन् । भिडियोसहित
Prevके हो ह्वाइट फंगस ? यो झन खतरनाक, संक्रमितको मस्तिष्क र श्वासप्रश्वास सम्म असर
Nextआज १६ गतेका मुख्य समाचार – तलब र भत्ता बढ्यो, परीक्षा हुने, घरभाडा, बिजुली बिल, लकडाउन खुकुलो
रबि लामिछानेले जनमैत्री अस्पताल मेरो हैन भनेर बिरो,धीलाई स्पष्ठिकरण दिएपछी हरिले दिए यस्तो चेतावनी,उठाए यस्तो प्रश्न ? हेरौ भिडियो